Guddoomiyihii haweenka Kismaayo oo u geeriyootay cudurka Coronavirus - Caasimada Online
Home Warar Guddoomiyihii haweenka Kismaayo oo u geeriyootay cudurka Coronavirus
Guddoomiyihii haweenka Kismaayo oo u geeriyootay cudurka Coronavirus
Kismaayo (Caasimada Online) – Allaha u naxariistee waxaa caawa magaalada Kismaayo ku geeriyootay guddoomiyihii ururka Haweenka degmada Kismaayo Sureer Maxamed Cali oo maalmihii dambe ku xanuunsaneyd isbitaalka guud ee magaalada.
Sureer Maxamed ayaa ka mid aheyd dadkii laga helay xanuunka Coronavirus, waxaana maalmihii lasoo dhaafay caafimaadkeeda lagula tacaalayey isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo.
Dad badan oo la il daran xanuunka COVID-19 ayaa ku jira xilligan isbitaalka magaalada Kismaayo, dhakhaatiirta isbitaalka ayaana ka dareyrinaya xaaladaha ay ku sugan yihiin bukaano badan oo jiifa isbitaalka.
Waa qofkii seddaxaad oo cudurka Coronavirus ugu geeriyooda magaalada Kismaayo, waxayna magaaladaasi ka mid tahay meelaha ugu badan dalka ee laga diiwaan geliyay kiisaska cudurka Coronavirus.
Tirada guud ee kiisaska cudurka Coronavirus gudaha Soomaaliya ayaa gaartay 1,219 xaaladood, tirada guud ee bogsashada ayaa gaartay 130 qofood, halka dhimashada uu sababay cudurkaas ay weli tahay 52 qofood, inta la ogyahay.